Qaybtii 9aad: Sheekadii Taleex “Ma nimankii iyadoo dhiig Taleex ququlayo durbaannada ka ag tumanayey” – make music movie Edition: International | Video
Published On: 15 April 2013 1:46 am Taleex Arts / Wararka | By Taleex Media Qaybtii 9aad: Sheekadii Taleex “Ma nimankii iyadoo dhiig Taleex ququlayo durbaannada ka ag tumanayey”
Daahir: War Beynoow maxaa saaka lagusoo kaakacay.
Dalmar: Wax oomati diiday ma jirin xaggayagee bal iska warrama xaggiina.
Daahir: Annana waa la nabadqabeye bal adduunyo ka warran maxaad war haysaa.
Dalmar: Dooc iyo dareen toonna ma ogin, deegaanina dee taa aad arkayso ama wararkaba ku maqlaysid. Meel walba sidaan warka ku hayo roobkii waa gaadhay Nugaal, Xaysimidaa iyo Soolasha ha ubadnaadee…
Daahir: Waa yahay allow aadan beerka beeline…
Dalmar:Cali Nuur wixii barigaa jirey waxna way Soolashay dib ugu soo noqdeen waxna jidkay soo hayaan horraantoodiina Xaysimaa udubka la dhigay…
Daahir: Waa yahay…
Dalmar: War magaalo ima gelin oo adaan kaaga marti ahay kaa, intaa iyo war yaridaase bal warran adigu.
Daahir: War badan ma hayno, haddii Eebbe kuu sama oggol yahay, gurigaa Dhooddi ilaa afkaa hoose Gudin wixii sidaa uga soo rogan Jeexii Diicsinweyne ku siman oo dhooddidaa hoose leh weliba ilaa halkii xagaafku ka gudbi jirey ceelkii …muxuu ahaa magaciisu belada …
Dalmar: Fadhi yar dee…
Daahir: Haaheeeey belada magiciisaanan hore usoo qabane, xaggan kor usoo kac ilaa Mataano bankii Saxarla dhulkaasoo dhan xareeddaa mulacyaynaysa, bandarkii Carrooleyna dadkii waaba laga daad gureeyoo xaggaa iyo tuurtii ko dhoweydbaa halhaleen naftii laagula baxsaday.
Dalmar: War bal day… waa yahay…
Daahir: War magaalo ceelkaa Taleex shalay marbaan lugta soo geliyoo inkastoo Faraskii aan umalaynayo inuu Qoob gariir ku yara dhacay sibuu saaka uheetinayeye! wax wara waxaa yaalley nimankii Garaddada ee Saaxdheer kus shirsanaa baa fadhiyey.
Dalmar: War nimanka Garaaddada warkoodu imaba geline maxay Taleex la gole yimaaddeen?
Daahir: Horaan kuugu sheegee horta ajandihii Saaxdheer laga wadey ayay Taleex la yimaaddeen. Waxaase ay yimaaddeen Taleex oo siday ka filayeen si ka geddisani taallo.
Dalmar: Oo Beynoow maxaa bedellaa.
Daahir: Heedhe Dadku siday ku ogaayeen maaha. Waxay uyimaaddeen dad daalay oo wax badan fahmay, oo la xaalufiyey, intii durbaanka utumi jirtey ayaaba laba garab ukala fadhiday.
Dalmar: Allow aadan beerka beelin; oo heedhe sidee loo kala qaybsamay?
Daahir: Waxa loo kala saftay koox la fallaagoowday kii fududaa ee Axmed Garaash iyo Koox la safatay ninka daacadda u ah Cali Khaliif ee Carraalle Mahad.
Dalmar: Oo yar-yarkeennii fudfududaa iyagu dhinacee raaceen.
Daahir: Labadaa dhinacba way daba hashleynayaan.
Dalmar: Oo maxaa loo lahaa buraashaddaa Garaashkama hadhi karaan?
Daahir: Weger, war heedhe Buraashaddu dhinac walba hadda waa taallaa. Buraashado ka waaweyn baa Saaxdheer iyo Buuhoodleba laga keenay oo rag culusi wataan!
Dalmar: Subxaana Allah! Oo Beynoow halkalaan ku warsaday
Dalmar: Beryahan waxaan maqlayey martida Taleex meelo dhaadheer baa lagaga hortegayey oo waa loo dad badsanayey si loo soo dhoweeyo. Maxaa sababay in Garaad Saleebaan markuu magaalada soo dhexgalay in loo diro Oday Kaskiqabe ah iyadoo Taleex ay joogeen Garaaddadii Dhulbahntoo dhammi.
Daahir: Heedhe Dalmar “ma diraacdii baa ku fahmo tirtay sidan waad dhaantaye” Sawtaan hore kuugu sheegay in waxan la Khaatumaynayo sababo badan loo samaystay mid ka mid ahina ahayd sidii reerkan la Ugaadhyahamaynayo loo kala diri lahaa Dhulkoodana Somaliland gacanta loogu gelin lahaa, Garaadkoodana loo go’doomin lahaa.
Dalmar: Oo heedhe maxay ka helayaan dibindaabyada Ugaadhyahan.
Daahir: Dalmaroow cilmi badan bay ubahantahay inaad fahamto arrinkani, adiga keliyahina su’aashaas kamaan maqal. Aanse si aad ufahmi karto kuugu fasiree. Beryahaynu yaryarayn sheekooyinkii Geela hotiisa laynagu maaweelin jirey ma maqli jirtey Wiil Aabbihii ama Walaalkii ama adeerkii udiley si uu isagu boqor unoqdo…
Dalmar: Ilaah og waan maqli jireye iiwad, haye, haye…
Daahir:..Nimankani waa niman xukun ubuseelay oo ubeer caddaaday danna kama laha wixii ba’aya iyo wixii baaba’aya. Hadday garasho leeyihiin ma kuway ku badbaadi lahaayeen bay ba’ooda ka talin lahaayeen.
Dalmar: Oo heedhe aan su’aashii hore ku noqdee nimankii Isimada ahaa xaggay imminka wax marinayaan. Yacni maxay Taleex ka wadaan.
Daahir:Tay keenaanba tii kale ka darane, hadda waxaan maqlayaa markay meel waliba soo xidhantay innagii reer Taleex bay rabaan inay mashruuc inaga furtaan.
Dalmar: Oo beynoow innaga ma nafbay inagaga tageen xaggay inaga soo gelayaan.
Daahir: Waxay beryahanba wadwadeen Cali Nuur dhiigga dhexyaalla ayaannu gelaynaa.
Dalmar: Gelaynaayaaaaa! Oo ma dhiig aanay qoladan iswadataa dhigin baa Cali Nuur Dhexyaalla? War maxaa tidhi…..hmmmmmm wallee waa yaab!
Daahir: Heedhe arrinkani iskama imaane “Hadh iyo Hoosiisna waa ku lammaan yihiin oo hoostay kaga naban yihiin.
Dalmar: Oo hadh iyo hoosiisna ma nool yihiin oo ma hadlayaan. Miyaanay weli garowsan tay Cali Nuur badeen.Ma nimankii iyadoo dhiig Cali Nuur Taleex qulqulayo Durbaanada ka ag tumanayey!
Daahir: Nin dareenlaa wax daaraane weli wixii bay dabada ka wadaan. Haddayba odayo war maqabto ah ergo hor leh usoo direen.
Dalmar: Ergo ’aa! Oo ma iyagoo kalaa ergo soo dira sawtay joogeen dhiiggoo qoyan oo weliba iyaga loo saarayo inay ku luglahaayeen. May maalintaa wax ka qabtaan hadday dadnimo iyo garasho leeyihiin. Garaad Saleebaan baa bilowgii damcay inuu arrinka galo shirkii la watayna dib loo dhigo isna waa taad ogayd wixii la marsiiyeye——
Daahir: Oo weliba aan kuugu daree miyaad illoowday, Cali Nuur maantuu shilku dhacay maalintii ku afar ahayd waa tay 7 nin oo wada Cali Nuura usaareen arrinkaa si ay udhexgalaan.
Dalmar: Iga daa ha’isoo xusuusin arrinkaase. “Illeyn talo isumaa kaa sheegto” waan xusuustaayoo hadhka iga daaye, Hoosiis buu ahaa ninkii is hortaagay dhexdhexaadintii Cali Nuur caammadayadii iyo cadkii na hortaagnaana isagaa af-duubay.
Daahir: Maantana durbaanno kale uun bay umeel bannaysanayaane tolnimo ma daarra odayadan Lillaahida ah ee ay farriimaha soo farayaanna way lu goynayaan.
Dalmar: Beynoow maanta maskaxferedkii baad igu kicisaye, ninkan la Hoosiisaynayaa iyo inta ka talo qaadataa hadday tolnimo doonayaan waxay ila tahay inay garanayaan meeshay ku jirto tolnimadu…
Daahir: … Aan kaa boobee tolnimadu waxay kusoo noqon kartaa “Nimankii gacan kudhiiglayaasha ahaa oo lasoo gacan geliyo” wixii intaa ka baxsani waa uun xumaan kale sii raadin iyo doqonimo duf u bax ah!
Dalmar: Allow afka ha ku goynin Afkaygaad kala baxdaye waa waxa loo yidhi “Ragga waxa magtooda loo simay malahoodaa isu taga”
Daahir:Cali Nuur maanta dhibkii hore dhib loogu daro uma baahna.
Dalmar: Heedhe Maskaxferedkii baa aad ikarkarinayee bal geedkaa rayska leh baan hadhqoodaalkiisa golcasta ka gelayaaye waa yahay
Daahir: Waxaad yeelaysaa labadan Kiniinka ah liq horta, Mugucaa xiddigaalena dhawr jeer muquur si aad uqabowdo, waxan Hypertension baa la yidhaahdaaye go’ana qoyso oo madaxa ku duubo geedkana hadhkiisana golcasta ka gal.
Dalmar: Heedhekan Daahir ahi waa belaayo wax walba yaqaanna! Oo illeyn dhakhtarnimadana waxbaad ka taqaanney! Ilaahow Cali Nuur hanoo waayin!
Daahir: Heedhe nabaaddiino Cali Nuuryona garan maynee dulin baa ku baxoo waa taa hadh iyo hoosiis loo soo diraye.
Dalmar: Nabadgelyo Inaadeer.
Lasoco Qayta 10aad.